Rondedzero yeIron Saga mazinga | la-manette.com
7 novembre 2021 ndima Mathilde Grimard
Shandisa akanakisa mechs muIron Saga kuhwina dzimwe hondo. Heino yekupedzisira Iron Saga chati, iyo inoratidza akanakisa mayuniti / mechs ekushandisa izvozvi.
Kidou Sentai Iron Saga, inowanzozivikanwa seI-Saga, inosanganisa kunakidzwa kwemitambo-yekutamba nekugutsikana kwekuunganidza zvikamu (zvinonzi mechs).
Pakutanga, zvinogona kuve zvakaoma kuona kuti ndeapi mechs angave anobatsira kune anotevera matanho emutambo, kunyanya mumakwikwi ePvP hondo.
Kubatsira vatambi, isu takagadzira rondedzero yechokwadi tier inoisa mechs emutambo kubva kune yakanyanya kunaka kusvika pakuipisisa, zvichibva pane yavo PvP kugona. (mutambi achipikisa mutambi).
Ngatitange kubva pakutanga.
Aya parizvino ndiwo akanakisa mech mumutambo.
Zviri pachena kuti rakanakisa melee robhoti mukirasi yayo. Ane kukuvara kwakanakisa kwakabatana neyekupedzisira kurwa maitiro anotora 5 masekonzi.
Iyo Mephisto ndiyo yakakwana musanganiswa wekurwa agility uye kukanganisa kunogona. Iye zvakare ane durability yakanaka uye kusadzivirirwa kune debuffs.
Kufanana neMephisto, Asura inokurumidza uye inogona kubata kukuvara kwakanaka. Yakasimba Durability yakaisirwa parutivi hunhu hunobatsira hunonetesa uye hunokuvadza vavengi kana Asura yaparadzwa.
Ranged Attacker Debuff
Iyo Huang Long robhoti yakanakira avo vanofarira kutamba zvakachengeteka ivo vachiwana mhedzisiro yakanaka. Kurwisa kwake kwenguva refu hakuwanzokundikana, uye anogona kurwisa vavengi kuti atange.
Iyo Zulong inofarirwa semurwi wemhando dzakasiyana, asi mumamiriro ekukurumidzira anogona kuzvidzivirira ari padyo. Kurwiswa kwake nemelee kunogona kudzosera vavengi kumashure, zvichimubvumira kuvarwisa zvakare ari kure.
Robhoti iri rakanakira kutonga kwevanhu sezvo richikwanisa kurova vavengi vakawanda nedanda rimwe chete. Izvo zvakare zvakachengeteka kushandisa sezvo inotsemuka kuita 2 madiki mechs kana yaparadzwa.
Iyo Chivi 3 ine yakanakisa kurwisa uye nekumhanyisa iyo inoibvumira kukwikwidza neakanakisa mechs. Inonyanya kushandiswa neiyo G mode zano ?? umo rinozviporesa. Kugadzira G-modhi, zvisinei, kunoda kugadzirira kwakawanda zvisati zvaitika.
Iyo Galahad inoratidzwa semuvhimi wemhando yepamusoro mukirasi yeSS. Kufamba kwake kwakakosha zvakare kune imwe yekukuvara kwakanyanya kunowanikwa. Inogara padanho A nekuda kwekusasimba kwayo, asi kunze kweiyo yakanaka.
Iyo Belial ndiyo yakachengeteka tangi sarudzo kune avo vanoida. Iine anti-distance barriers iyo inochaja, uye inovandudza hutano hwayo kana yadonha pasi pe50%. Kana iwe uchitsvaga kupona, iyo Belial ndiyo yako yakanyanya kubheja.
SaBelial, iyo Paimon ine rechargeable anti-distance barriers. Yakashongedzerwa nesarudzo dziri nani dzekudzora mhomho, nehunyanzvi hweAoE hunogona kuremadza mayunitsi evavengi zvakare.
Iyo Reno mk2 isimba re melee rinokwanisa kuisa kumanikidza pavavengi kunyangwe pakutanga kwekurwa nekukuvara kwayo kunoparadza. Simba iri rinobhadharwa nekugadzirisa kwayo kusina kusimba. Kana iwe uine chivimbo chakanyanya muhunyanzvi hwako hwekugumbura, iyo Reno ndiro robhoti rako.
Iyo Bat Samurai kufema kwemweya mutsva mukirasi yemelee. Ane kukuvara kwakanyanya asi haasi mberi pazviri. Pane kudaro, anosarudza kusimbisa synergies yake yakavanzika uye kuzvidzivirira kuburikidza nekuporesa.
Kana iwe uchida kutsamwisa vadzivisi vako zvakakwana, shandisa Dangaioh. Akanyanya kuoma kuuraya uye anogona zvakare kukubhowa nemamiriro ezvinhu. Robhoti iyi yakanakira kurwa kwenguva refu uye kusingaperi.
Iyo Susanoo murwi anokurumidza kurwisa ane zvakare inoshandisika arsenal yeAoE kugona. Chidziviriro chinodzivirira chinopedza bhokisi rayo rematurusi rakazara.
Tsukiyomi idanho Robhoti rekutsigira nekuda kwekugona kwayo kumisa nguva uye kukanganisa masaisai emuvengi. Inogonawo kuchengetwa uchishandisa chivharo chiri kure.
Iyo Thor inogona kuporesa uye kuunza mamiriro emamiriro kana yaiswa munzvimbo yakaoma. Izvi zvinoita kuti ive imwe yeanoshungurudza mechs kubata nawo.
Robhoti inokurumidza kwazvo ine yakakwirira-mbiri AoE kurwiswa kuchengetedza mhomho. Iyo Goraiga iri kushomeka mudhipatimendi rekukuvadza, zvakadaro.
Robhoti inouraya yakareba-refu ine setup yakakodzera. Shandisa Wood kana Trista sevatyairi vezvikepe zvekupedzisira.
Aya ma mech ari pazasi zvishoma S. Iwo akanakisa mukati mawo. Iwo akanakisa ari ega uye dzimwe nguva anogona kupfuura maS-tiers nekuseta kwakanaka.
Aya makani isarudzo dzakasimba muPvP (Mutambi vs. Mutambi) mechi. Havana simba seavo vari pamusoro pechinyorwa, asi izvo hazvibvisi kugona kwavo kuhwina.
Iyo Xuang Wu inotarisa padhuze kurwisa kwepedyo uchishandisa kurwisa kwakasimba uye nekuremara kukanda.
Robhoti agile iyo inogona kuburitsa moto element kurwisa vavengi. Chinhu chakasimba chekukuvadza.
Sarudzo huru yekusangana kweboss uye PvE. Yakasimba zvakare muPvP zvemukati asi inofanirwa kuyedzwa naIgarashi kuvhura kugona kwake.
Iyo Deer Stalker ine yakanakisa kunzvenga mumutambo. Inogona kurwisa vavengi uye yobva yakurumidza kudzoka uye kuunza mamiriro ezvinhu pavari.
Iyo Nero inongoshanduka kuita robhoti iri kure mushure mekunge yakwidziridzwa kuenda kuKai. Cherekedza nekuti irobhoti iri nhanho F pasina iyi kusimudzira.
Inogovera zvimwe zvakafanana neInfinity cosmos. Iye zvakare ane yakanaka tank kugona.
Iyo Albatross irobhoti rinodzivirira iro rinogona kutora hits pamwe nekunzvenga. Ane hutano hwekuvandudza buff iyo inowedzera kupona kwake.
Verenga zvakare: 20 PC mitambo inotambwa zvakanyanya nemutongi
Aya ma mechs achiri akanaka sarudzo dzePvP, asi anotora kwakawanda kushanda nesimba uye tuning kuti ishande.
Kupona kwakanaka uye kugona. Kukuvadza kwake kwakashata uye kugona kwake kunomudzosa padanho C.
Iyo Zhuque ine kukuvara kwakanaka uye kugona asi ine shaky furemu. Kune ma mechs ari nani ane hunhu hwakafanana pasina kupira survivability.
Iyo Gwain irobhoti yakasarudzika yakasarudzika iyo inogona kuvhiringa vanopikisa ne debuffs.
Nepo ruzhinji rwekurwiswa kweAstaroth kuri munharaunda yemelee, ine hoko inobata iyo inogona kuvhara gaka pane vasingafungire vavengi.
Iyo Valk inobvumira mutyairi wayo kushandisa hunyanzvi hunotevedzana. Zvinogona kunzwika senge kugona, asi hurombo hwaValk huchienzanisa.
Iyo Dhimoni Blade inonetsa kubata nekuda kwekupenya kwayo. Iyo teleports kunhandare yehondo ichibata kukuvadza kune vanopikisa.
Iyo Longdan ndiyo yako yakajairwa kure robhoti inopfura zvinokandwa uye mabara. Anogonawo kuita kukuvara kwakanaka padhuze.
Iyo Brynhild ibhobhoti inokurumidza ine kuwirirana kwakanaka nevatyairi vayo. Dambudziko rake rinobva pazvinhu zvezvombo zvaanoshandisa. Havana kunaka zvachose.
Sarudzo yakasimba yemelee mecha. Yakanyanya imwe-dimensional zvakadaro.
Mutongi III S
The Tyrant ibhobhoti yakanaka-refu, asi inoshaya maturusi ekunyatso kurwisa vanorwisa melee.
Inotarisa pakuvhiringidza vavengi panguva yakareba kwazvo. Kwete kushandiswa kwakawanda nekuda kwesimba rayo rakaderera rekukuvadza.
Iko hakuna zvakawanda zviri kuitika kuMutongi II. Iyo inonyanya kushandiswa muPvE mamiriro nekuti ine akasiyana zvachose setup yePvP.
Iine kukuvara kwakanaka uye yakanaka siyana, asi iwe unogona chete kuvimba nemadhodhi kuti urarame.
Aya ma mech ane chaiwo niche anoshandisa, ndosaka usingazosangana nawo kazhinji muPvP. Mamwe acho akanaka kwazvo muPvE.
Iyo Agaress ine kupona kwakanaka nekuda kweiyo anti-range nhoo uye kurwisa-refu-refu. Iye, zvakadaro, ane kukuvara kwakaderera, zvichimuisa padanho D.
Zvakafanana neAgaress, asi nekugona debuff. Anotamburawo nekukuvara kwakaderera.
Bhaari irobhoti rinodhiraivha rine kukuvara kwakaderera uye nhovo dziri pakati nepakati.
Kana iwe uchangotanga, Artemis ipikicha yakanaka. Kugona kwayo kwekuvhiringidza kwakasimba. Anozununguka zvakanyanya kusvika kumagumo emutambo nekuda kwekukuvara kwake kwakaderera uye kurarama.
Robhoti yakanaka inogumbura nekuda kwekugona kwayo kugadzira clones uye kukanda shurikens. Inoshaya kurarama nekuda kwehunhu hwayo husina kusimba.
Kukuvadzwa kwakanaka kweTsukikage kunogona kukuendesa kure muPvE, asi kusasimba kwayo kuri kuderera muPvP.
Iyo Bloodwolf ndiyo yako yakajairwa kure missile launcher. Kuodza mwoyo mune zvakawanda.
Iyo Baihu ingori yako avhareji melee robhoti iyo isiri yakasarudzika munzira ipi neipi.
Qi Qing Yakareba
Iri robhoti rine kukuvara kwakaderera uye kuderera kwekupona, asi ine yakanaka kukanganisa kugona.
Verenga zvakare: 35 inofanirwa-kuva nemitambo yekutamba kana wakanamatira kumba
Aya ndiwo akaipisisa mechs mumutambo wePvP. Ziva kuti uchava nedambudziko kana ukaashandisa.
Sarudzo yakasimba yakasarudzika yemabhosi, asi inozununguka zvachose muPvP.
Taylor Star anoita zvibodzwa zvisina kunaka mumapoka ese.
Iine zvombo zvinokandwa nemoto, asi mamiriro ayo asina kusimba ari pasi muPvP.
Chinangwa cheMudzvanyiriri I mumutambo uyu ndechekutengeswa nemari yekuvandudza Tyrant II kana III.
Iyo Kamui haisi robhoti yakaipa, haingowanzo shandiswa muPvP. Nekudaro, inogamuchirwa zvakanyanya seimwe yeakanakisa bump marobhoti aripo.
Iyo Juque shotgun's playstyle yakasarudzika. Dambudziko nderekuti, harishandi. Tora zvakasara zverobhoti iyi uye uvake zviri nani.
Maitiro ekuona yako Spotify stats